कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंक : कम्पनी विश्लेषण (बिहीवार, २३ फागुन २०७५)
कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंक विक्रम संवत् २०६६ असोज १ गते नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिई सोही वर्षको असोज ३ गतेदेखि कारोबार शुरू गरेको हो । चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा कम्पनीले रू. ३ करोड ६१ लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ४७ प्रतिशत बढी हो । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीले रू. २ करोड १४ लाख नाफा कमाएको थियो । चालू आवको पुस मसान्तसम्ममा कम्पनीले रू. २ करोड ६६ लाख खराब कर्जा उठाउन सफल भएकाले नाफामा वृद्धि भएको हो । कम्पनीको चुक्तापूँजी १७ दशमलव ९५ प्रतिशत बढेर रू. ५३ करोड १३ लाख पुगेको छ ।
५ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरेपछि चुक्तापूँजी बढेको हो । २०७५/७५ को मुनाफाबाट शेयरधनीलाई ५ प्रतिशत बोनस शेयर र ६ दशमलव २९ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको छ । बैंकले नगद लाभांश शेयरधनीको बैंक खातामा पठाएको छ भने रिजर्भ कोषमा रू. ९ करोड ९७ लाख छुट्याएको छ । बैतडी र डोटीमा शाखा विस्तारको स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई निवेदन दिएको कम्पनीका चिफ अपरेशन अफिसर जगतकुमार महतराले बताए । उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा चारओटा शाखा कञ्चनपुर, कैलालीमा खोल्ने योजना रहेको बताए ।
2019-03-07 - 66 view(s) - abhiyan